Nhau - Chiremba Chigadzirwa Chigadzirwa Outlook Y2021- Y2025
Indasitiri yechiChinese yezvigadzirwa zvekurapa yagara iri chikamu chinomhanya-mhanya uye yave kutariswa semusika wechipiri mukurusa wezvehutano munyika. Icho chikonzero chekukura nekukurumidza ndechekuti kuwedzera kuri kuita kwehutano mune yekurapa mudziyo, mishonga, chipatara uye hutano-hutano inishuwarenzi. Kunze kwezvo, vatambi vazhinji vepamba vanopinda mumusika uye vatambi vane mukurumbira vari kukurumidza kushandura tekinoroji iripo nekuvandudza zvigadzirwa zvitsva.
Nekuda kweCovid-19, China iri munguva yekukurumidza kukudziridzwa kwezvigadzirwa zvemushonga zvigadzirwa zvine chinangwa chekubata chiratidzo chepamberi. Panguva imwecheteyo, zvigadzirwa zvitsva uye matsva ekurapa matekinoroji ari kugara achiunzwa kumusika izvo zvinotyaira kukurumidza kukura kweyekurapa michina indasitiri, kunyanya kukura nekukurumidza kwemakambani anotungamira mune yega yega chikamu.
Mumakore achangopfuura, China yakapinda munguva yekuvandudza yezvigadzirwa uye tekinoroji kukwidziridzwa, senge biodegradable stent yakatangwa naLepu Medical, pombi yeIVD yakatangwa naAntu Biotech neMindray Medical, uye endoscopy inogadzirwa nekutengeswa neNanwei Medical. Iyo yepamusoro-yekupedzisira mavara e-ultrasound zvigadzirwa zvinogadzirwa neMindray Medical uye Kaili Medical, uye yakakura-yakakura imaging michina yeUnited Imaging Medical inokwanisa kugadzirisa iyo inopinza yepakati- neyepamusoro-kumagumo zvigadzirwa muminda yavo, nokudaro vachiumba iyo yepakati simba mukati utsanzi uye kukwidziridzwa kweChina zvekurapa zvekushandisa. .
Mu2019, Chinese yekurapa mudziyo makambani akanyorwa ane hombe yemari mukaha. Makambani epamusoro makumi maviri akanyorwa ane mari yepamusoro ndeyeMindray Medical, nemari inosvika 16.556 bhiriyoni, uye kambani yakadzikira ndeye Zhende Medical, nemari inosvika 1.865 bhiriyoni yuan. Iko kukura kwemari yekuwedzera kweiyo The Top20 yakanyorwa makambani 'mari gore-ne-gore kazhinji iri padanho rakakwirira. Iwo Makumi epamusoro makumi maviri akanyorwa makambani mumari anonyanya kugoverwa muShandong, Guangdong neZhejiang.
China yekukwegura huwandu hwevanhu huri kukura nekukurumidza kupfuura angangoita chero dzimwe nyika pasi. Iine huwandu hwevanhu vanokwegura nekukurumidza, kuwedzera kuri kupinda kwekupinda muzvinhu zvinoraswa zvakabatana zvakasimudzira kukurumidza kukurumidza kwemushonga unoraswa wemusika.
Gomarara uye chirwere chemoyo nemoyo zviyero zvinoramba zvichikwira uye iko kushandiswa kwekusiyanisa kwakawedzeredzwa kuongorora mukiriniki kuri kuramba kuchikura, izvo zvinowedzera mukushandiswa kweiyo yepamusoro-yekumanikidza radiography zvinoshandiswa. Chiyero chegwoth grwoth chinofungidzirwa kusvika pamamirioni 194 muna 2022 zvichienzaniswa nemamirioni makumi matanhatu nematatu muna2015.
Kuongororwa kwechokwadi kunoda kujekesa kwepamusoro uye kunyatsoita tekinoroji yekufungidzira.
Imwe mutemo wezvekurapa mudziyo indust ry iri kurwadza kuChinyorwa 35 che "Mitemo pane iyo Kutarisa uye manejimendi eMedical Devices". Inotaura kuti mashandisiro ekurapa-ekushandisa chete haafanirwe kushandiswa kakawanda. Zvishandiso zvekurapa zvakashandiswa zvinofanirwa kuparadzwa uye kunyorwa zvinoenderana nemirau. Kurambidzwa kwezvinhu zvinoraswa zvinodzivirira zvinobudirira zvinodzora zvimwe zvipatara kubva pakushandisa zvekare-yekumanikidza radiography zvinoshandiswa kuchengetedza mari. Izvi zvinoitisa kudiwa kwezvakanyanya-kumanikidza imaging zvinoshandiswa.
Zvichienderana nemaitiro ari pamusoro, iyo indasitiri yezvokurapa iri pasi pekushandurwa kukuru. Iyo yegore mukomboni kukura mwero iri ingangoita 28%. Antmed ndiyo inotungamirayakakwira yekumanikidza sirinji gadzira muChina uye isu tiri kwazvo kuisa mari muR & D maitiro. Isu tiri kutarisira kupa mupiro kuChina indasitiri yekurapa uye kuchengetedza yedu indasitiri mutungamiri chinzvimbo.